I-China GMF NGOKUGQIBELELE KWE-GANGRISI YOKUGQIBELA IMALI YAMachiza nabaxhasi | Iqela le-Guosheng
IZiko leMveliso yeGantry ngokubanzi
Isetyenziswe kakuhle kwindiza, i-auto, kumashishini ngokuchanekileyo ekubumbeni, uthotho lwe-GMF lunokubonelela ngenkqubo yokusebenza kwesixhobo esisebenzayo kunye nokujongana nesoftware enokuqhutywa ngokulula. Oku kubonelela ngeendlela ezininzi zokukhetha ezininzi eziza kukuvumela ukuba uqaphele ngokupheleleyo iphupha lokuchaneka okuphezulu.
Ubume besixhobo somatshini sihlaziywa ngohlalutyo lwezinto ezisemgangathweni kuwo onke amabakala ukusuka kuyilo olusisiseko ukuya kuqinisekisa isantya esiphezulu kunye nokuchaneka okuphezulu kokuqhubekeka koomatshini. Uvavanyo lokulinganisa lokudalwa kwemveliso luye lwaveliswa xa iziko lomatshini lizisa umthwalo ukuze kuqinisekiswe ukuqina kwesixhobo somatshini.
Umlawuli onganyanzelekanga wegreyidi uqonda ulawulo oluvaliweyo.
Ukutsibeka komqamelo okuphindwe kabini kumgangatho wesantya sebhokisi yegiya, Yonyusa ukuphuma kwesiporho
I-90 degree ethe tyaba yokugaya intloko
Ingcaciso: Ukutolikwa backlash, ukuguqulela impazamo quadrant, ubude kutoliko isixhobo, ukuguqulelwa radius isixhobo, ukuguqulela ubushushu (ngokuzithandela).
Umsebenzi wokondla: inqanaba lokutya linciphisa, inqanaba lokondla ngomzuzu ngokujikeleza, umlinganiselo wokutya, umda wokukhawuleziswa kwenkqubo.
Umsebenzi we-spindle: Isantya sokuphinda-phinda, ukuphinda-phinda umsebenzi wokucwangcisa, isantya sokuqhelanisa nokulinganisa, umda wesantya.
I-Tool Changer Changer (i-ATC) yenziwa yimagazini yesixhobo kunye nesixhobo esitshintsha iingalo. Umtshintshi ozenzekelayo naye ufakwe ngokwahlukeneyo kwisixhobo somatshini ngenjongo yokuthintela iimpembelelo ezimbi zokudlidliza ngexesha lokutshintsha kwesixhobo esizenzekelayo kunye nezinye izizathu ngokuchanekileyo. Ukukhetha isixhobo samkela indlela yedilesi esisigxina kwindlela emfutshane. Zonke izixhobo zibuyele kwisikhundla sokuqala, ke ingxaki yengxabano phakathi kwezixhobo ezikhulu ziqwalaselwa kuphela kufakelo lokuqala. Isixhobo esisebenzisa iindlela ezimbini sisebenzisa indlela emfutshane.
Ukuphola ngokuSebenzisa ind I-CTS） ngokuzithandela
Ngenxa yokubanda ngaphakathi kwesingqala sokuphola okupholileyo esivela kwizixhobo, kunokuba nefuthe ngqo kwindawo yokusebenza kunye nasekwenzeni isixhobo sokusika, isiphumo sokupholisa sibhetele kunolungelelwano oluqhelekileyo, senze umgangatho ongaphezulu womgangatho wenxalenye.
Edlulileyo: IZiko le-GMF le-5-FACE GANRY MachINING
Okulandelayo: I-GMS DIE NEZIKO LOKUGQIBELA LOKUQHUBELA
Ukucaciswa 13 Uthotho 15 Ungcelele 18 Ungcelele
Uhlobo lomatshini Umgca emibini kunye nobunzima Iyunithi GMF2213T GMF2713T GMF2215T GMF2715T GMF3215T GMF2518T GMF3018T
Iitreyini ezintathu zomgaqo GMF2213L GMF2713L GMF2215L GMF2715L GMF3215L GMF2518L GMF3018L
Ubungakanani obusebenzayo mm 2200 × 1100 I-2700 × 1100 2200 × 1300 I-2700 × 1300 3200 × 1300 2500 × 1500 I-3000 × 1500
Umthwalo osebenzayo T 6 8 6 8 8 10 12
Iyasebenza-T-slot 7-22 × 150 7-22 × 175 I-9-22 × 160
Ububanzi bobuntwana mm 1300 1500 1800
Ukuhambahamba kweTiaxial X / Y / Z mm 2000/1300/900 2500/1300/900 2000/1500 / 900 2500/1500/900 3000/1500/900 2500/1800/900 3000/1800/900
Umgama ukusuka kwimpumlo etyabayo ukuya kumphezulu wetafile mm I-180-1080 I-150-1050 I-180-1080 I-150-1050 I-150-1050 I-150-1050
Isantya sokutya okukhawulezayo (X / Y / Z) m / imiz 15/15/10 15/15/10 12/1/10 15/15/10 12/1/10
Isixhobo sokubamba isixhobo BT50 BT50 BT50
Isantya sokuhamba ngesantya esiphezulu rpm 6000 6000 6000
Amandla amakhulu emoto kW 15 / 18.5 15 / 18.5 22/26
Ubuninzi be-torque ye-spindle Nm I-295 (Belt) / 940 (ZF) I-295 (Belt) / 940 (ZF) 250 (Belt) / 795 (ZF)
Isixhobo se-Tool magazine (Inketho zobumbeko)
Isixhobo seMagazini yesixhobo 24 24 24
Ubungakanani besixhobo esikhulu (Isixhobo esipheleleyo / Isithuba) mm Ngo-100/2006 Ngo-100/2006 Ngo-100/2006
Ubungakanani besixhobo esiphezulu mm Ezingama-300 Ezingama-300 Ezingama-300
Ubunzima besixhobo esikhulu ikg 15 15 15
Ukuchaneka kwezixhobo zomatshini
Ukubekwa ngokuchanekileyo X mm 0.016 0.016 I-0.02 0.016 I-0.02
Y mm 0.016 0.016 I-0.02 0.016 I-0.02
Uphinda-phindo ngokuchanekileyo X mm 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Ubunzima besixhobo somatshini T 18 20 19 21 23 22 24
Inani lamandla onke KVA I-55 I-55 I-55